राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : माधव समूहको भोट बादल कि खिमलाललाई ? - Kohalpur Trends
३१ वैशाख, काठमाडौँ । तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच सहमतिको प्रयत्न अगाडि बढेको छ ।
बिहीबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच लामो सम्वाद भएपछि एमाले मिल्ने बाटोतिर उन्मुख देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेका नेपाल समूह एकाएक यूर्टन भएपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओली र नेपाल समूहबीच वार्ता अगाडि बढेको छ ।
ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख भइरहँदा ६ जेठमा हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने, बागमती प्रदेशमा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेकै दुई उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनाएका छन् भने नेता नेपालका तर्फबाट डा. खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार छन् ।
एमाले विभाजन उन्मुख हुँदा विपक्षी दलहरुको साझा उम्मेदवार बनेका देवकोटा मात्रै होइन, मतदाता पनि अलमलमा परेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्छन् । ‘पार्टी एकताको विषयमा केन्द्रमा छलफल जारी छ । एक/दुई दिनमा थप प्रष्टता आउँछ । यही बीचमा उपनिर्वाचनको विषयमा पनि छलफल हुन्छ’, नेता नेपाल निकट बागमती प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपाल भन्छन् ।
उनी डा. देवकोटा आफ्नो उम्मेदवार भएको बताउँछन् । अर्का बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै आउनुपर्ने बताउँछिन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली इतर गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका देवकोटाले भने पछाडि नहट्ने अडानमा छन् । ‘निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीतिप्रति मेरो गहिरो लगाव छ । राजनीतिक दलहरुले म प्रति गर्नुभएको विश्वास र भरोसाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । संविधानप्रदत्त स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरु विना व्यवधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु । मेरो उम्मेदवारी पनि यही विचारबाट अभिप्रेरित छ’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
ओली र नेपालबीच सम्बन्ध सुधार उन्मुख हुँदा काँग्रेस, माओवादीलगायत दललाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । किनभने माधव नेपाललाई विश्वास गरेर माओवादीको प्रस्ताव र कांग्रेसको समर्थनमा देवकोटाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका ११० प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख गरी २३८ जनाले मतदान गर्दैछन् ।
वाग्मतीमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि १७ जेठमा राष्ट्रियसभाको उपचुनाव हुँदैछ । उपनिर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत भएपनि उम्मेदवारी परिसकेको छैन ।
यदि एमाले मिलेमा यहाँ पनि माधव समूहले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने छैनन् । जबकी कांग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव समूहले दृगप्रसाद पाण्डेयलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने तय गरिसकेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने माओवादी केन्द्र छोड्दा पदमुक्त भएका चन्द्रबहादुर खड्कालाई अघि सार्ने सम्भावना छ ।
Previous Previous post: माधव समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको आशंका : ओलीले उपयोग मात्रै त गर्दैनन् ?
Next Next post: २४ घण्टामा सुदूरपश्चिमका ३० जना संक्रमितको मृत्यु